Haweenkii Soomaaliyeed ee shaqada loo geeyay oo qaarkood la kufsaday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Haweenkii Soomaaliyeed ee shaqada loo geeyay oo qaarkood la kufsaday
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in kufsi lagula dhaqaaqay qaar ka mid ah haweenkii Soomaaliyeed ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud u dirtay dalka Sacuudiga, si ay halkaasi uga soo shaqeystaan.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in maalin walbo ay soo baxayaan cabasho aad u xooggan oo ay muujinayaan haweenkan.
Waxa uu xildhibaanka tilmaamay in haweenkaasi qaarkood la kufsaday, kuwo la jir-dilo, kuwo kalena aaney helin xuquuqdii ay lahaayeen.
“Haweenka qaarkood waa la kufsaday, qaarkood waxaa lagu sameeyay wax ka baxsan shareecada Islaamka, annaga qeylo dhaan baan wadnaa, waana in si deg-deg ah baaritaan loo sameeyo” Sidaasi waxaa yiri xildhibaan Dalxa.
Dhinaca kale, Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa ugu baaqay dowladda Farmaajo in si deg-deg ah ay wax uga qabato arrintaan oo aanay yareesan, si loo badbaadiyo haweenka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Sacuudiga.